Venerable Kusalasami: အကြင်နာမဲ့တဲ့ ဘုန်းကြီး
တစ်ခါက တရုတ်နိုင်ငံမှာ အဘွားအိုတစ်ဦးရှိတယ်။ သူက ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကို နှစ်ပေါင်း ၂၀-ကျော် ထောက်ပံ့တယ်။ သူက ဘုန်းကြီးနေဖို့ တဲငယ်လေးတစ်လုံး ဆောက်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ ဘုန်းကြီးတရားထိုင်တဲ့ကာလအတွင်းမှာ အစားအသောက်တွေလည်း လှူတယ်။ တစ်နေ့တော့ သူဟာ “ငါ ကျွေးမွေးထောက်ပံ့လာတဲ့ကာလအတွင်းမှာ ဒီဘုန်းကြီး ဘာတရားတွေများ တိုးတက်မှု ရှိသလဲ”လို့ စဉ်းစားမိတယ်။ ဒါနဲ့ ဘုန်းကြီးကို စမ်းသပ်ဖို့ သူက ကာမဆွဲဆောင်မှုပြည့်ဝတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ဘုန်းကြီးထံကို လွှတ်လိုက်တယ်။ သူက “ဘုန်းကြီးဆီကို သွား၊ ရောက်တာနဲ့ အဲဒီ ဘုန်းကြီးကို ဆွဲဖက်လိုက်၊ ပြီးရင် ‘ကဲ… ဘယ်လို ခံစားရလဲ’လို့ ရုတ်တရက် မေးလိုက်”လို့ မှာလိုက်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးလေးဟာ ဘုန်းကြီးရဲ့ တဲလေးကို ခရီးသွားဟန်လွှဲ သွားလိုက်တယ်။ ရောက်တာနဲ့ မဆိုင်းမတွ ဘုန်းကြီးကို ကြင်နာယုယစွာနဲ့ ထွေးပွေ့လိုက်တယ်။ ဘုန်းကြီးကို ဖက်ထားရင်းနဲ့ “အရှင်ဘုရား အခု ဘာဆက်လုပ်မလဲ”လို့ မေးလိုက်တယ်။ အဲဒီအခါမှာ ဘုန်းကြီးက အလွန်ကဗျာဆန်တဲ့ စကားလေးကို ပြောလိုက်တယ်။ “သစ်ပင်အိုကြီးတစ်ပင်ဟာ ဆောင်းတွင်းမှာ အေးစက်တဲ့ကျောက်ဆောင်ကြီးပေါ်မှာ ရှင်သန်ပေါက်ရောက်နေတယ်၊ ဘယ်နေရာမှာမှ နွေးထွေးမှုဆိုတာ မရှိဘူး (An old tree grows onacold rock in winter. Nowhere is there any warmth.)”လို့ ပြောလိုက်တယ်။ အမျိုးသမီးလေးဟာ ပြန်သွားပြီး အဘွားအိုကို အကြောင်းပြန်လိုက်တယ်။
အဲဒီအခါ အဘွားအိုက ဒေါသတကြီးနဲ့ ထအော်တယ်။ “အမလေး … စဉ်းစားကြည့်ပါအုံး၊ နှစ်ပေါင်း ၂၀-လောက် သူ့ကို ကျွေးမွေးလာလိုက်ရတာ၊ သူကတော့ ဒီကောင်မလေးအပေါ် နည်းနည်းမှ ထည့်မတွက်ဘူး၊ ကောင်မလေးအပေါ် စိတ်ညွှတ်မှုနည်းနည်းမှ မဖြစ်ဘူး၊ တဏှာလောဘဖြစ်စရာတော့ မလိုပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် အနည်းဆုံးတော့ မေတ္တာ၊ ကရုဏာတရားရှိကြောင်းတော့ ပြသင့်တာပေါ့”လို့ မကျေမနပ် ပြောနေပါတယ်။ ပြောပြီးချင်းမှာပဲ အဘွားအိုဟာ ဘုန်းကြီးနေတဲ့ တဲလေးကို သွားပြီး မီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။
ဇင်ဇာတ်လမ်းတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးခန်းလေးက ပိုမို စည်ကားလာတယ်။ ပါဝင်ဆွေးနွေးဝေဖန်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ များလာတယ်။ သီဟိုဠ်ကျွန်းလေးမှာ အခုတလော မိုးတွေ နေ့စဉ်မပြတ် ရွာသွန်းနေတာကလည်း ဆွေးနွေးပွဲလေးကို ပိုစည်ကားစေတာပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ မိုးအေးအေးလေးဆိုတော့ အတွေးလေးတွေက နွေးနေတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ ဒီဆောင်းပါးထဲက ဇာတ်လမ်းလေးကို ဘာသာပြန်နေဆဲမှာ တစ်ယောက်က လာပြီး သူ့ကို ထောက်ပံ့နေတဲ့ ဒကာမကြီးအကြောင်းကို လာရင်ဖွင့်တယ်။ “ငါ့ ဒကာမကြီးကကွာ၊ သူ့ဆီကို ငါက ဖုန်းမဆက်တာ ကြာသွားပြီ၊ အဲဒါ သူတို့ကို သံယောဇဉ်မရှိပါဘူးဆိုပြီး ငါ့ကို စိတ်ဆိုးနေတယ်”တဲ့။ ကိုယ်ကလည်း ပြောလိုက်ရတယ်။ “ဒါဆို ရပြီ၊ မင်း ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို ဖတ်ကြည့်”လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဖတ်ပြီးတော့ သူက အားပါးတရ ရယ်မောလိုက်တယ်။ ပြီးမှ လေးလေးနက်နက် တစ်စုံတစ်ရာကို တွေးနေဟန် လုပ်နေတယ်။
တစ်ယောက်က ပြောနေတယ်။ လူ့ဘ၀၊ လူ့လောကအမြင်နဲ့ ရဟန်းဘ၀အမြင်က လောကကြီးတစ်ခုထဲမှာ နေနေရပေမယ့် တော်တော်ကြီးကို ခြားနားနေတယ်။ ငါတို့ မြန်မာနိုင်ငံပဲ ကြည့်လေ။ တကယ့်တကယ် တရားအားထုတ်ကျင့်ကြံနေတဲ့ ကိုယ်တော်တွေ၊ တကယ့်ကို စာပေကျမ်းဂန်တတ်မြောက်တဲ့ ကိုယ်တွေဟာ ထောက်ပံ့သူမရှိ၊ ကူညီသူမရှိ၊ ပံ့ပိုးမယ့်သူမရှိ ဖြစ်နေရတယ်။ လူအထင်ကြီးအောင် လုပ်တဲ့ကိုယ်တော်တွေ၊ နှစ်လုံးသုံးလုံး ဂဏန်းပေးသူတွေကတော့ ကြီးပွားနေတယ်။ အများစုကို ပြောတာပေါ့ကွာ။ လူဆိုတာက သူတို့တွေ့ရင် ပြုံးပြနေမှ၊ ဖော်ရွေမှ ကျေနပ်နေကြတာ။ သူ့တရားနဲ့သူ၊ အမြဲတမ်း အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်နေသူတွေကိုတော့ ကြည်ညိုရကောင်းမှန်း သိသူတွေက ရှားပါးလှတယ်။ တချို့ဆို ဘာပညာမှလည်း မတတ်ဘူး၊ ဆင်ခြင်တုံတရားလည်း သိပ်ရှိကြတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် လူတွေရဲ့အကြောကို သိတယ်၊ လူဂျောနပ်တယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ပဲ ဘုန်းကြီးစစ်သလို ဖြစ်နေတယ်။ ငါ့စကားက နည်းနည်းတော့ ကားသွားသလား မသိဘူး။ ငါကတော့ အဲဒီလောက်ထိ တွေးပစ်လိုက်တယ်။ တစ်ယောက်က သူလည်း အဲဒီလို တွေးမိကြောင်း ထောက်ခံနေပါတယ်။
သူများပြောတာတွေကို အတန်ကြာ ငေးနားထောင်နေရင်းမှ ဘေးက တစ်ယောက်က “နေပါအုံး၊ ငါတို့ အရင်ဆွေးနွေးသင့်တာက ဇာတ်လမ်းထဲက ဘုန်းကြီး ပြောလိုက်တဲ့ စကားလေးပဲ။ ဒီစာသားလေးက တိုပေမယ့် ကဗျာဆန်နေတယ်။ သာမန်ပြောရိုးပြောစဉ် ပြောလိုက်တဲ့စကားမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ဘာတဲ့ … An old tree grows onacold rock in winter. Nowhere is there any warmth တဲ့။ ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင် ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတာ မသိရဘူး။ ဒီနေရာမှာ An old tree ဆိုတာက ဇာတ်လမ်းထဲက ဘုန်းကြီးကို ရည်ညွှန်းတာ ဖြစ်မယ်။ သူ့အသက်က ငယ်ချင်လည်း ငယ်နေမယ်။ ဒါပေမယ့် သစ်ပင်အိုကြီးရဲ့ ရင့်ကျက်မှုမျိုး၊ ပြည့်စုံမှုမျိုးနဲ့ ပြည့်စုံနေပြီလို့ ပြောချင်တာ ဖြစ်မယ်။ အဲဒီသစ်ပင်အိုကြီးကတဲ့၊ ဆောင်းတွင်းကြီးမှာ အေးစက်တဲ့ကျောက်ဆောက်ပေါ်မှာ ပေါက်ရောက်နေတယ်တဲ့။ ကဲ.. ဘယ်လောက် ပြောင်မြောက်တဲ့ တင်စားချက်လဲ။ ငါတော့ မျက်စိထဲ မြင်ယောင်ကြည့်တယ်။ သစ်ပင်ကြီးမှာ လျှပ်ပေါ်လော်လီတဲ့ အမူအရာမျိုး၊ အားအင်တွေ ဖျပ်လက်နေတဲ့အမူအရာမျိုး တစ်ခုမှ မတွေ့ရဘူး။ သူ့မှာ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်မှုနဲ့ ပြည့်စုံမှုတွေပဲ ရှိတယ်။ နောက်ပြီး အဲဒီအပင်ကြီးမှာ ဘယ်နေရာ ဘယ်အစိတ်အပိုင်းမှာမှ နွေးထွေးမှု မရှိတော့ပါဘူးတဲ့။ အဲဒီတော့ ဆိုလိုချင်တာကတော့ သူ့မှာ ကာမစိတ်အာရုံအတွက် နေရာမရှိတော့ဘူး။ ကာမကိစ္စတွေ ကင်းနေပြီလို့ ပြောချင်တာပဲ။ ခက်တာက ….”။ ပြောနေရင်းက ရပ်သွားတယ်။ “ဘာလဲ ခက်တာက ဆိုတာက”ဆိုတော့ “နေစမ်းပါအုံး၊ ကွမ်းလေးတော့ ထွေးပါရစေအုံး”လို့ ပြောပြီး အခန်းပြင်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ ကျန်သူတွေကလည်း သူရဲ့ “ခက်တာက”အဆက်ကို ငံ့လင့်နေကြပါတယ်။
သူက အခန်းပေါက်ဝပြန်ဝင်ရင်း “ခက်တာက အဖွားကြီးကွ၊ ပြောရရင်တော့ အရှည်ကြီးပဲကွ၊ လိုရင်းပြောရရင် အဖွားကြီးက ဒီစကားကို ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ်ကောက်သွားသလဲ၊ ဒါကို ငါသေချာမသိဘူး။ ငါ့အထင်တော့ အဖွားကြီးက ဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားထဲက သန္တရသ-အေးငြိမ်းဓာတ်ကို သူ မသိလိုက်ဘူး။ တရားတွေ ဒီလောက်ကျင့်နေတာတောင် မေတ္တာတရားခေါင်းပါးသွားတယ်လို့ ယူဆလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ ငါ ထပ်ပြီး စဉ်းစားမိတာက အဖွားကြီးက ဘယ်လို စကားမျိုး ပြောစေချင်တာလဲ၊ ဘုန်းကြီးဆီကနေ ဘယ်လို အပြုအမူမျိုးကို မျှော်လင့်ခဲ့တာလဲ၊ အခုတော့ အထောက်အပံ့မပေးတော့တဲ့အပြင် ကျောင်းလေးကိုပါ မီးရှို့ပစ်ခဲ့တယ်”။ စကားဝိုင်းလေးက အတန်ကြာ တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့တယ်။
စကားဝိုင်းလေး ပြီးသွားတော့ အခန်းရှေ့က ညောင်ပင်အိုကြီးအရင်းကို သွားခဲ့တယ်။ ဧရာမညောင်ပင်ကြီးရဲ့ ပင်စည်က အဖုတွေ၊ အထစ်တွေနဲ့ တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်ကြီး တည်စွဲနေတယ်။ ဘေးမှာ ခဏထိုင်ချလိုက်တယ်။ မျက်စိထဲမှာ အတွေးထဲမှာ ပန်းချီကားတစ်ချပ်က ထင်ထင်ရှားရှား ဖြစ်တည်လာနေတယ်။ ပန်းချီကားရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ “An old tree grows onacold rock in winter. Nowhere is there any warmth.”လို့ ရေးထားတယ်။ အထဲကပုံတွေက စာမရေးဖုန်းမဆက်တာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ အဝေးက အထောက်အပံ့အလှူရှင်များ။ သူတို့မျက်နှာမှာ စာမရေးဖုန်းမဆက်လို့ မကျေနပ်တဲ့ပုံရိပ်တွေ ပြနေတယ်။ ဇင်းပုံပြင်ထဲက အဖွားလို “အကြင်နာမဲ့တဲ့ ဘုန်းကြီး”ဆိုပြီး …..
Posted by ashin kusalasami on October 09, 2010
ဒါမျိုးတွေ မှတ်သားရတာ အရမ်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
လေးစားစွာ လိုက်နာနိုင်အောင် ဂရုထားပါ့မယ်။
ကလားတိုင်း ဆိုးတယ်လို့ တော့ မပြောပါနဲ့ 
ဘု၇ား၇ှင် ဂေါတမ ကိုယ်တိုင်က ခေါတောကုလားပါ
Gotama Buddha "my teachings are called BRAHMAYANA (path to Brahman/the Absolute)"- SN 5.4
I have not madeanew path monks, i have only rediscovered what was lost long ago"
Lets gather how "original" Buddhism is or wasn't fromasmall section of the pervasively consistent Nikayas: [DN 1.249] " I teach the way to the union with Brahman, I know the way to the supreme union with Brahman, and the path and means leading to Brahman, whereby the world of Brahman may be gained." [DN 1.248] "all the peoples say that Gotama is the supreme teacher of the way leading to the Union with Brahman!" [It 57] "Become-Brahman is the meaning of Tathagata." [SN 3.83] "Without taints, it meant `Become-Brahman'." [SN 5.5] "The Aryan Path is the designation for Brahmayana (path to Brahman)." [MN 1.341] "The Soul is having become Brahman." [SN 4.117] "Found the ancient path leading to Brahman." "I have seen" says Buddha, "the ancient path, the old road that was taken by the former all-awake Brahmins, that is the path i follow, lost long ago. Just like an overcovered path lost long ago is that which i have discovered" [SN 2.106] "I have not madeanew path monks, i have only rediscovered what was lost long ago" Itivuttaka "Gotama isaTEVIJJAN (Knower/expert in the VEDAS)"-MN, Udana "Gotama isaVEDASOTTHIM (Sage/expert in the Vedas)"- Digha1. Gotama was oft called himselfaVEDAGU..........or "(someone) that has gone to the Vedas" "Gotama isateacher of MONISM (advayavada)" The answer is, not original at all, in any respect.
ဒကာရဲ့ ကွန်မန့်က ဘယ်ကို ပြောတာလဲ မသိဘူး။ ကိုဇော်မျိုးကို ပြောတာလို့တော့ ထင်ပါတယ်။ အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်နှိပ်ကွပ်နေတာတွေကို ဦးဇင်းဆိုက်ထဲမှာ သဘောမကျပါ။ ဒီပို့စ်ကို တင်တာကလည်း ဘာသာပြန်မို့လို့ပါ။ သူဟာ မွတ်စလင်တစ်ယောက်သာမက ပညာတတ် ပါမောက္ခတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်လို့ ဘာသာပြန်ပြီး တင်လိုက်တာပါ။ ဘယ်ဘာသာကိုမှ နစ်နာစေလိုစိတ် မရှိပါ။ ဘာသာတရားတိုင်းမှာ ကျင့်သုံးတတ်ရင် အလှအပတွေ တသီကြီး ရှိနေတတ်ပါတယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက် လက်ခံထားပါတယ်။
Gautama himself wasaKalar.
Why did you say Kalars are bad, should be have exception.
What is Brahmayana?
Who is Ab-Raham?
What is Ab in sanskrit?
What is Raham in Sanskrit?
Who is Abraham in Abrahmic religions?
Go wiki and search Burma, its originally was Brahma.
Today buddhism came from Ashoka, the murderer who killed his own brothers 99 in total to get kingship.
Ashoka killed all holy monks who did not want to accept him.
After he killed all learned monks, he made new teachings collected from wicked strayed monks who followed murderer's wish and got feeded by this murderer.
Gautama himself said his teaching will last for 500 years after his DEATH. Means today buddhism is not belong to him. So these today teachings came from whom, from which philosophers product?
Gautama have over 4000 slave wives, he was born, he was married, he enjoied with 4000 wives/body slaves, he got enlightened, he preached to his people and then he died. He never divorced with his wives.
We never heard he prayed to former buddhas.
He opposed praying to these gods and acts of his people all time.
Do you hear any Arahat in these centuries? No.
Today all(all) monks daily musterbating in temples.Our innocent prople are feeding them blindly.
Find out ourself bare head!
our actual Gautama have long beard and never bare headed.
Go back to last 2500 years and find out what is the actual meanning of anatta in northern india at that time.
Clean garbages from your heart and your brain first.
u may delete my comments, which are not suitable to read due to my insults. soory its my bad habit.
do not follow my way. we should love each other and make our world better for next generations.
I learnt all history of religions from where these came from. It made me to hate all today religions. We cannot find original teachings from founders. It made me feel unhappy.
When somebody said like my god is bigger than your god, i feel that good teachings of the founders had been changed by like this selfish people.
never meant to insult you, and your beautiful block. u may better delete my comments.
(ဘာသာတရားတိုင်းမှာ ကျင့်သုံးတတ်ရင် အလှအပတွေ တသီကြီး ရှိနေတတ်ပါတယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက် လက်ခံထားပါတယ်။)
အရှင်ဘုရား ashin kusalasami
ရိုသေစွာလျှောက်တင်အပ်ပါသည်ဘုရား။ အရှင်ဘုရားတို့တွေဟာ လောကုတ္တရာကိစ္စမှာ တပည့်တော်တို့ထက် သာလွန်ပါတယ်။ လောကတ္တရာနဲ့ ပတ်သက်ရင် အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ နည်းပေးလမ်းပြမှုကို တပည့်တော်တို့က ဦးထိပ်မှာ ထားပြီး လိုက်နာရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် လောကီရေးရာမှတော့ အရှင်ဘုရားတို့တွေထက် တပည့်တော်တို့က ပိုပြီးတတ်သိပါတယ် ဘုရား။ နိုင်ငံရေးသမားတွေရေးတဲ့စာပေတွေဟာ လိမ်ညာပြီး သူတို့အတွက် အကျိုးရှိအောင်ရေးထားတာတွေချည်းပါ။ နိုင်ငံရေးစာအုပ်တွေမှာ ရေးထားတဲ့ “ဘာသာတိုင်းမှာ ကောင်းအောင်သင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ စကားဟာ” လိမ်ညာချက်သက်သက်ပါဘုရား။ အခုတပည့်တော် ဒီမှာလာ ကော်မန့်ရေးတာ ကုလားတွေကို သတ်ဖြတ်.. ဖြတ်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကုလားတွေ လိမ်တိုင်းယုံနေတဲ့ကိစ္စကို မြန်မာလူမျိုးတွေကို သတိပေးလိုတဲ့ ကိစ္စပါပဲ။ သူတုိ့လိမ်တိုင်း ယုံနေမယ်ဆိုရင် တပည့်တော်တို့ သာသနာအဖျက်ခံရပါလိမ့်မယ်။
ခင်ဗျားဟာ မွတ်ဆလင်ကုလား တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ ကျုပ်အတိအကျပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ကုလားလိမ်သမျှ ယုံနေတဲ့ အညံ့စား မြန်မာတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ မြတ်စွာဗုဒ္ဓဟာ ကုလားမဟုတ်ဘူး။ သာကီဝင်ဆိုတဲ့ စကားကို မကြားဖူးရင်လေ့လာပါ။ နိပေါတွေရဲ့ ရုပ်အဆင်းဟာ ကုလားတွေလို မဲတူးမနေဘူး။ မြတ်ဗုဒ္ဓမှာ မယားငယ်တွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စ။ အသောက မင်းကြီးက ဗုဒ္ဓဘာသာကို မကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကို သတ်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေဟာ လုပ်ကြံပြောတဲ့ ကုလားတွေရဲ့ စကားပါ။ ငါက ကုလားကျောင်းမှာ တက်လာတာ.. အဲလောက်တော့ ပျင်းတောင် ပျင်းသေးတယ်။
ဒီမယ် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကောင်းတယ်လို့ပြောနေတယ်ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ၁၀၀% က သူတော်ကောင်းတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုချင်းမဟုတ်ဘူး။ မွတ်ဆလင်ဝါဒ ယုတ်ညံ့တယ်ဆိုတာ မွတ်ဆလင်တွေ 100% မကောင်းဘူးလို့ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာအများစုဟာ မေတ္တာတရားရှိတယ်။ မွတ်ဆလင်အများစု ဟာ လူစိတ်ကင်းမဲ့တယ်လို့ ဆိုလုချင်းဖြစ်တယ်။
မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ မေတ္တာတရားကို သက်ဝန်ယုံကြည်တဲ့ ကျုပ်တို့ရဲ့လူ့ဘောင်မှာ လူသတ်၊ မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ လူဆိုးဂိုဏ်ဆိုတာ မရှိသလောက်ပါပဲ။ (နအဖကို လူသတ်တယ်ဆိုတဲ့ ကလေးကုလားစကားတော့ မပြောနဲ့။ ဒီမိုအစိုးရတွေနဲ့ မွတ်ဆလင် အစိုးရတွေ လူဘယ်လောက်သတ်လဲဆိုတာ အရင်လေ့လာပါ) ဥပမာပေးမယ် . . မွတ်ဆလင်တွေကို သတ်ဖို့စည်းရုံးကြည့်ပါ။ ဘယ်သူမှ လိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ လူလူခြင်းစာနာတဲ့ စိတ်ရှိနေတာ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ သင်ကြားချက်ကြောင့်သာဖြစ်တယ်။ ကုလားတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူလို နေထိုင်ခွင့်ရနေတာ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားဓမ္မကြောင့်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
မွတ်ဆလင်တွေကြတော့ ယုတ်ညံ့တဲ့ သင်ကြားချက်တွေကြောင့် သူတို့လူ့ဘောင်မှာ အကြမ်းဖက်တဲ့ လူသတ်ဂိုဏ်းတွေ ထွက်ပေါ်နေတယ်။ ကုလားတွေ သူများနိုင်ငံမှာ ခိုကပ်နေရင် အဲဒီနိုင်ငံက အိမ်ရှင်တွေနဲ့ အဓိကရုဏ်ဖြစ်တယ်။ သူတို့နိုင်ငံတွေမှာကျတော့ အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်ကြတယ်။ အခုမြန်မာပြည်မှာ နအဖနဲ့ ဒီမိုရန်ဖြစ်နေတာကို ကုလားတွေ အခွင့်အရေးယူပြီး မွတ်ဆလင် လွှမ်းမိုးရေးလုပ်နေတာ .. လူကျင့်ဝတ်နဲ့ ညီရဲ့လား? အဲလိုကုလားတွေကို မဆန့်ကျင်ပဲ ငြိမ်ခံရင် ငါတို့က ငတုံး.. ငအ တွေပဲဖြစ်ကုန်မှာပေါ့။
ကိုနေမျိုး ရေးတာကော၊ ကိုဇော်မျိုး ရေးတာတွေရော ဖတ်ပါတယ်။ မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို နှိပ်ထားတာ၊ နှိပ်ကွပ်ထားတာတွေ (မလေးရှားမှာ တရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုရင် နှိပ်ကွပ်ထားတာမျိုး) အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချို့အချက်တွေကိုတော့ လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့်....ဒါပေမယ့် အခု ပြောနေကြတာက ဘာကို ပြောချင်တာလဲ၊ ဘာအကြောင်းအရာကို ဆွေးနွေးချင်တာလဲဆိုတာ ဘယ်ဘက်မှာမှ မရှိဘူး။ ဆိုလိုတာက ဒီလို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပြောနေရင် ပြီးဆုံးမှာ မဟုတ်သလို မလိုအပ်တဲ့ တစ်ယောက်အပြစ် တစ်ယောက်ပြောတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။
အထူးသဖြင့် ဦးဇင်းမှာ တာဝန်ရှိနေတာ တစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကိုနေမျိုး ထားခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟောကြားချက်တွေက မှားနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ သို့မဟုတ် လိုသလောက်လေးတွေကို ယူပြီး ရေးထားတဲ့စာတွေ ဖြစ်နေတာပါ။ မြတ်စွာဘုရားရှင် ဟောကြားထားတဲ့ တရားတော်ရဲ့ ဆိုလိုရင်းတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဦးဇင်း အဲဒီစာတွေရဲ့ မူရင်းဟောကြားချက်တွေကို တင်ပေးပါ့မယ်။ ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ် မူရင်းကို သေချာမသိဘဲ ရမ်းသမ်းပြီး အရူးချီးပန်း စွပ်စွဲကြ၊ ရေးသားကြ၊ ပုတ်ခတ်နေကြရင် ဘာအကျိုးမှ မရှိဘဲ၊ အမုန်းတရားတွေသာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကိုနေမျိုးထားခဲ့တဲ့ စာတွေဟာ ဗုဒ္ဓ၀ါဒကို တစ်ခြားဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒတွေနဲ့ ရောထွေးသွားနိုင်စရာ ရှိတဲ့ စာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်နောင်ကျရင် တကယ့်ကို ပညာကို လေ့လာလိုက်စားချင်တယ်ဆိုရင် အပြည့်အစုံလေ့လာပြီး သူများကို ပြန်မျှဝေတာ ကောင်းပါတယ်လို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
မူရင်းကိုတော့ ဦးဇင်းရေးမှသာ လာကြည့်လိုက်ပေါ့...
ဖတ်စေချင်သောစာအုပ်များ အတွက် ဦးဇင်းကို အ
၇မ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် တကယ်လည်း ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်
ခပ်ညံ့ညံ့လူများ၏ မုန်းတီးမှုကို ကျွန်တော်ကြိုက်၏
အခုတလော အဖြစ်အပျက်များ ၂